Football Khabar » रोनाल्डोपछि नेइमारमाथि ‘बलात्कार’को आरोप, प्रहरीमा मुद्दा !
रोनाल्डोपछि नेइमारमाथि ‘बलात्कार’को आरोप, प्रहरीमा मुद्दा !
एजेन्सी, जेठ १९
पोर्चुगिज फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोमाथि लागेको बलात्कार आरोप सेलाउन नपाउँदै अर्का सुपरस्टार फुटबल खेलाडीमाथि बलात्कार आरोप लागेको छ ।
फ्रेन्च क्लब पिएसजी तथा ब्राजिलका नेइमारमाथि एक महिलाले आफू नेइमारबाट बलात्कृत भएको आरोप लगाएकी छन् । फ्रान्सको साओ पाउलो प्रहरीमा ती महिलाले नेइमारले आफूमाथि बलात्कार गरेको भन्दै मुद्दा हालेकी छन् ।
ब्राजिलियन एक प्रतिष्ठित अनलाइन मिडियाका अनुसार नेइमारले एक होटेलमा ती महिलामाथि जबर्जस्ती गरेका थिए । ती महिलाले नेइमारले आफ्नो इच्छाबिपरीत जबर्जस्ती शारीरिक सम्बन्ध राखेको उजुरीमा उल्लेख गरेकी छन् ।
ती महिलाले प्रहरीमा दिएको उजुरीमा नेइमारसँग आफ्नो चिनजान सामाजिक सन्जाल इन्स्टाग्रामार्फत् भएको र क्रमशः म्यासेज आदानप्रदान भएको बताएकी छन् । मित्रता बढेपछि उनीहरूले एक दिन होटेलमा भेट गर्ने मिति तय गरे ।
तर, ती युवतीलाई भेट्न होटेल पुगेका नेइमार नशामा पुगेका थिए । र, उनले युवतीमाथि यौन शोषण गरे । ती युवतीले यो पनि दाबी गरेकी छन् कि, घटनापछि आफू डराएकाले तुरुन्तै घटना सार्वजनिक गरिनन् ।
पीडित भनिएकी महिलाले प्रहरीमा दिएको उजुरीमा आफ्नो नाम गोप्य राखेकी छन् । यो घटना मे १५ मा भएको महिलाले उजुरीमा जनाएकी छन् ।
यता, अघिल्लो दिन मात्रै नेइमारका पिताले ब्राजिलको एक टिभीसँग कुरा गर्दै आफ्नो छोरालाई फसाउन लागिएको भन्दै बचाउ गरेका छन् । ती महिलाले आवश्यक परेपछि आफूले थप सबुत दिने पनि उजुरीमा उल्लेख गरेकी छन् ।
गत साता मात्रै नेइमारलाई ब्राजिलको कप्तानबाट हटाएर ड्यानी आल्भेसलाई नयाँ कप्तान बनाइएको थियो । ब्राजिलका प्रशिक्षक टिटेले रसिया विश्वकपपछि नेइमारले पटक–पटक अनुशासन तोडेको भन्दै उनलाई सुधिन्र चेतावनीस्वरूप कप्तानबाट हटाएको बताएका थिए ।
नेइमार हाल कोपा अमेरिका खेल्न ब्राजिलको राष्ट्रिय टिममा सामेल छन् । उनी प्रशिक्षणमा व्यस्त छन् । कोपा अमेरिका जुन १४ बाट ब्राजिलमै हुँदैछ ।
प्रकाशित मिति १९ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०९:०३